Harting connectors: zvaunoda kuziva nezve izvi zvinongedzo | Mahara emahara
Zvimwe wakambonzwa nezve Harting zvinobatanidza uye ndosaka wauya kuchinyorwa chino uchitsvaga ruzivo, kana pamwe wakachiwana netsaona. Zvese mune imwe kesi uye imwe, apa ini ndichaedza kuita kujekeserwa nezve ichi chinongedzo chezvibatanidza uye izvo zvinonyanya kufadza zvigadzirwa.
Ivo vanozivikanwa kwazvo mu maindasitiri uye mainjiniya kunyorera, asi zvinogona kubatsira kune vamwe vanogadzira uye avo DIY Arduino mapurojekiti. Ndokusaka iwe uchifanira kuziva zvakawanda nezve izvo Harting inogona kukuunzira iwe ...
Rumwe ruzivo nezve zvimwe zvemagetsi zvigadzirwa izvo zvinogona kukufarira iwe kune ako mapurojekiti pano.
1 Nezve Harting
2 Harting Han chinongedzo
2.1 Han chinobatanidza mhando
3 Ndekupi kwekutenga zvigadzirwa zveHarting?
harting ikambani yakavambwa naWilhelm naMarie Harting muna 1945. Zvese zvakatanga sebhizinesi diki mugaraji rine 100 metres chete, muchitoro chekugadzirisa chiri muMinden, Germany. Ikoko vakatanga kugadzira michina yemagetsi yekushandisa mazuva ese, senge magetsi ekuchengetedza magetsi, magetsi ekubika, midziyo yemagetsi, waya dzemagetsi, magetsi emagetsi, simbi dzekupfeka, nezvimwe.
Wilhelm Harting akanzwisisa kuti indasitiri yeGerman yaida zvigadzirwa zvehunyanzvi, uye saka aive akazvipira kubva pakutanga kugadzira zvigadzirwa izvi uye kuzadzisa zvinangwa zvavo nehunhu uye nehunyanzvi. Zvigadzirwa zvavo zvaikosheswa zvakanyanya nekuda kwavo rkugadzikana, nyore kushandisa uye kuita zvinhu zvakasiyana-siyana. Muchokwadi, huzivi hwaHarting hwakaratidzirwa mumutsara naWilhelm: 'Ini handidi chero chigadzirwa chadzoserwa".
Mushure mokunge Rufu rwaWilhelm muna 1962Marie Harting akafunga kutonga kwekambani kwenguva, kusvikira vanakomana vake vaviri Dietmar naJürgen Harting vatora nzvimbo naye. Muna 1987, Margrit Harting aizobatanawo nemurume wemurume wake Dietmar bhizinesi remhuri, parizvino ari mumwe wevashandi vebhizinesi. Nhasi, Philip FW Harting naMaresa WM Harting-Hertz chizvarwa chechitatu chiri mubatsiri wekambani iyi ine mbiri ...
Mushure mekugadzira mhando dzese dzezvigadzirwa, ivo vakagadzira Han chinobatanidza, hari yekambani yeHarting yaive yekubudirira kukuru mumusika uye yaizozvisimbisa seyakajairwa pasirese. Ichi chikamu chakave chikuru musika axis yeboka rese rehunyanzvi.
Zvishoma nezvishoma zvayakakura muhuwandu hwenhengo uye mumiti yekugadzira, kubudirira mushure mekubudirira Parizvino ivo vatove nazvo 14 yekugadzira zvirimwa uye makumi mana nematatu ezvitengesi pasi rese. Iye zvino vazvisimbisa sevamwe vevanotungamira vepasirese veindasitiri yekubatanidza mhinduro yedata, chiratidzo uye magetsi
Pamusoro pekubatanidza, iyo kambani inogadzirawo zvimwe zvinhu, senge emagetsi mabhokisi ekushandisa ekushambadzira, magetsi ekugadzira magetsi ekugadzirwa kwemotokari nemaindasitiri, michina yekuchaja, tambo dzemotokari, pamwe nedzimwe mhando dzehardware nesoftware yemashandisirwo akasiyana, pakati payo marobhoti anowanikwawo.
Harting Han chinongedzo
Chimwe chezvinhu zvayo nyeredzi zvigadzirwa, sekutaura kwandakaita, ndizvo Han chinobatanidza neHarting. Kune akasiyana akasiyana siyana uye anozivikanwa nekureruka kwavo uye nekukurumidza kubata, kusimba kwavanopa, kushanduka kwekushandisa, hupenyu hurefu-hunotenderera, uye mukana wekuungana pasina kushandisa chero mhando yezvishandiso.
Iyo yekupedzisira ndeye chakakosha, sezvo mazhinji ekubatanidza aripo mukambani, kungave kwekushandisa kwemaindasitiri kana kwekumwe kushandiswa, gara uchisanganisira kushandisa zvimwe zvishandiso zvekumisikidza kwavo.
Pamusoro pezvese izvo, iyo Harting Han chinongedzo chave zvakare yakachengetedzwa (IP) kuitira kuti igone kumira mamwe mamiriro ekunze emumvuri, guruva, miviri yekunze, zvekuvhunduka zvemagetsi, zvakadirwa mvura, nezvimwe. Ehezve, chengetedzo inosimbiswa pasi pematanho IEC 60 529 uye DIN EN 60 529.
Rumwe ruzivo nezve Han uye zvishongedzo
Han chinobatanidza mhando
Aya maHartig Han maindasitiri ekubatanidza anga ari yakagadzirirwa kusangana nezvose zvinodiwa mumaindasitiri, zvekutengesa, zvekurima, zvekushandisa mumusangano, uye mamwe marudzi emaapplication. Zvese nekutenda kugungano rayo rakareruka uye mechina, magetsi uye dziviriro kubva kune mamwe mamiriro ekunze.
Hartin zvinongedzo zvinotsanangurwa zvinoenderana nekushandisa kwavo, huwandu hwematanda, magetsi uye zvazvino zvinomira, zvichiratidza zvinotevera mhando:
Iva ne com
Han Push Dhonza
Muzhinji, ivo vanogutsikana nezvinhu zvakaita seye hood uye hwaro, pamusoro pekuve nekusiyana-siyana nezvekuti ivo vari here varume kana vakadzi, yemhando dzakasiyana dzemagungano. Uye zvechokwadi Harting zvakare ine ese marudzi ese ekuwedzera zvishongedzo senge tambo, mabhokisi, zvigadzirwa, nezvimwe.
Ndekupi kwekutenga zvigadzirwa zveHarting?
Unogona tenga zvinongedzo izvi nezvimwe zvigadzirwa Harting muzvitoro zvakasiyana siyana, uyezve mune mamwe masaiti epamhepo anovatengesa. Mitengo yavo yakasiyana zvakanyanya zvichienderana nerudzi rwechigadzirwa chakasarudzwa, asi heano mamwe akakosha:
Harting 10m Ethernet yechirume yekubatanidza
Harting IDC chinongedzo chePCBB - Paki ye3 mayuniti
Crimper yeHarting Han D, S uye C.
Harting D-Sub yekutengesa paPCB kana yesocket
Yakazara nzira kuchinyorwa: Mahara emahara » Zvemagetsi zvigadzirwa » Harting connectors: izvo zvaunoda kuziva